Ihe ị ga-ahụ na Japan: ọrụ ebube nke Ala Ọwụwa Anyanwụ | Njem zuru oke
Na-eche ihe ị ga-ahụ na Japan bụ ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị na-eme njem gaa oku Mba nke ọwụwa anyanwụ na-awa. Maka na, agbanyeghị na anyị bụ obodo mepere emepe maka ọdịda anyanwụ, anyị amachaghị banyere akụkọ ntolite ya na ọdịnala ya.
Anyị enwetabeghị ozi banyere ịdị adị nke akụkọ ifo ya samurai ndị dike, nkà agha ya na akụkọ ihe mere eme ya site na Oku Meiji Revolution (1866-70), mgbe emere ka ọ dị ọhụrụ ma mepee ya na West. Agbanyeghị, Japan nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye gị. Dị ka ọ na-eme na España ma ọ bụ Francia, nwere ọgaranya na puku afọ gara aga nke gosipụtara na nnukwu ihe ncheta ya. Nakwa na ebube Oghere nkịtị na ị kwesịrị ịkwụsị ịkwụsị. Ihe a niile na mba nke oge a nke na-enye gị nkwukọrịta dị ebube. Ọ bụrụ n’ị na-echekwa ihe ị ga-ahụ na Japan, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Ihe ị ga-ahụ na Japan: obodo, ihe ncheta na ogige ntụrụndụ
1.1 Tokyo, obodo mara nma
1.2 Kyoto, isi obodo oge ochie
1.3 Agwaetiti Miyajima, ebe ọzọ dị mkpa iji hụ na Japan
1.4 Sirakawa, ezigbo obodo ndi Japan
1.5 Himeji Castle, otu n'ime ndị kasị dị egwu n'ụwa
1.6 Nara, obodo nke ụlọ arụsị
1.7 Nikko, ụlọ arụsị na ụlọ arụsị dị nsọ
1.8 Hiroshima, ihe nketa nke obi ọjọọ
1.9 Ugwu Fuji, oke obi uto ihu na Japan
1.10 Osaka, obodo nke atọ kacha buo ibu na Japan
2 Otu esi aga Japan
Ihe ị ga-ahụ na Japan: obodo, ihe ncheta na ogige ntụrụndụ
Ọ dịghị mfe ịchịkọta n’otu edemede ihe niile ị huru na Japan. Mana nke kachasị bụ na ịmalite njem gị na Japan site n'isi obodo ya, Tokio, ma gafere mba ahụ na-eleta obodo ndị ọzọ na ebe ndị nwere mmasị.
Tokyo, obodo mara nma
Ihe karịrị nde mmadụ iri anọ bi na ya, Tokyo bụ nnukwu obodo. Aha gị pụtara "Isi obodo ọwụwa anyanwụ" ọ nwere ọmarịcha onyinye na ethnographic na-enye ndị njem nleta.
N'ime obodo ị nwere ike ịhụ Obí eze ukwu, nke emere na narị afọ nke XNUMX na mkpọmkpọ ebe nke ụlọ ochie Edo. Kwesịrị ị gara na Tokyo na Shlọ arụsị Yasukuni, wuru iji kwanyere ndi agha dara ada agha; nke di egwu ọdụ, nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị puku square mita abụọ na nke ụgbọ oloko 4000 na-agafe otu ụbọchị, na ụlọ nsọ Buddha dị ka nke Gokoku o SensöNke ikpeazụ n’ime ndị okenye n’obodo ahụ.
N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịga mkpagharị, isi obodo Japan nwere ogige ntụrụndụ mara mma dịka Ueno, magburu onwe ya mgbe osisi cherị gị na-ama ifuru; ihe hama rikyu ubi, na ọdọ mmiri ya na ụlọ tii ya, ma ọ bụ Shiba, olee ebe ị ga-ahụ Zojoji temple.
Ma, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihe ọzọ mbụ, na-aga ebe nke Ryogoku, ebe ị pụrụ ịhụ a hey ma ọ bụ ụlọ nke sumo mgba; were osimiri nrughari na Osimiri Sumida, jee ije na Agbata Kagurazaka, ebe i gha ahu ezigbo geisha, ma ọ bụ na-asa ahụ ọkụ na Oedo Onsen Monogatari.
N'ikpeazụ, ị nwere ike ịse foto n'akụkụ nke Ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe nke Tokyo ma ọ bụ nwee ọmarịcha echiche nke obodo ahụ site na otu echiche nke Towerlọ elu Tokyo Skytree. Ma, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihe ngosi nka, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gaa na mba, nke nwere ụlọ ngosi ihe ngosi kachasị ukwuu nke nka ndị Japan n'ụwa, ma ọ bụ nke kachasị ama TeamLab Borderless Museum, raara nye nkà dijitalụ.
Na njedebe, ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ị nwere ike ịhụ ma mee na Tokyo, mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ. Agbanyeghị, anyị ga-ahapụ isi obodo iji hụ obodo ndị ọzọ.
Kyoto, isi obodo oge ochie
Ọ bụ ezie na ọ dị gị ka anyị na Tokyo na-egwuri egwu, obodo abụọ ahụ enweghị ihe ọ bụla ma e wezụga eziokwu ahụ bụ na Kyoto bụ isi obodo oge ochie nke Japan. Ya mere, ọ bụ obodo ncheta na geisha.
N'etiti ndị mbụ, ndị a na-akpọ Ihe ncheta akụkọ ihe mere eme nke Kyoto oge ochie, setịpụrụ ụlọ iri na asaa kwupụtara Ihe Nketa Uwa. N'etiti ha, anyị ga-ekwu banyere Ginkaku, Ryoan na Kiyomizudera temple; dị ịrịba ama Jlọ nnukwu Nijö, nke e wuru na narị afọ nke iri na asaa, ma ọ bụ Shimogamo na Ujigami ụlọ arụsị.
I nwekwara ike ịga ije na Kyoto site na Oke ohia Arashiyama achara ma ọ bụ site n'aka ya Zọ nke Nkà Ihe Ọmụma ma gaa leta obí eze ndi ozo dika nke Heian, Fushimi-Momoyama (wughachi) or the Imperial, ebe otutu ndi chiri eze.
Agwaetiti Miyajima, ebe ọzọ dị mkpa iji hụ na Japan
N'ịbụ nke dị ihe dị ka kilomita iri atọ site na aha ọjọọ nke Hiroshima, agwaetiti Miyajima bụ ama ama maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ. UNESCO ekwuputala ya Ihe Nketa Uwa, karịsịa maka igosipụta mmekọrịta kwekọrọ n'etiti ụkpụrụ ụlọ na odida obodo.
Ma ọ na-enye gị ihe ncheta dị ka Ọnụ ụzọ Ootorii, nke ghọworo ihe nnọchianya ya. Ọ bụ nnukwu ọdịnala ndị Japan nke a zụlitere n'oké osimiri nke ị nwere ike ịnweta mgbe mmiri na-aga.
Ọ bụ ihe dị mkpa ọbụna karị mma: na Shuklọ Shukshima Shinto, nke a na-ewu n’elu Oké Osimiri Seto. Ọ bụ ihe ebube e wuru n’ebe dị nsọ nke oge ochie ya malitere na narị afọ nke isii, ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime ya gbara ọkụ narị afọ isii ka e mesịrị.
Ya mere, ọtụtụ ụlọ ị nwere ike ịhụ taa dị na narị afọ nke XNUMX. Otu n'ime ha bụ Honden ma ọ bụ isi ụlọ, na Haiden ma ọ bụ oratorio na Okpomọkụ ma obu ulo onyinye, ha niile kwekọrọ na Ootorii ahụ ekwuru n’elu. Na mgbakwunye, ọ nwere obere ebe nsọ a na-akpọ Sessha Marodo-jinja.
Rinelọ Nsọ nke Itsukushima
Sirakawa, ezigbo obodo ndi Japan
Obodo nke Sirakawa ma ọ bụ Sirakawa-go, a na-akpọkwa ya "Obodo ọcha osimiri". N'ihi na ọ bụ ihe atụ zuru oke nke ihe ị ga-ahụ na Japan ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịmụ banyere ndụ ọdịnala n'ime ime obodo.
Obodo a mara mma dị na ebe a na-akpọ Alps ndị Japan, nke ugwu Hida, Kiso na Akaishi. Imirikiti ụlọ ha, ndị a makwaara dị ka minkas, zaghachi ụkpụrụ ụlọ gassho-zukuri. N'ihi ya, ha bụ ụlọ ndị e ji osisi ma ọ bụ ụrọ kpụọ bụ́ ndị nwere akịrịka hichapụrụ akịrịka, bụ́ ndị yiri aka abụọ na-ekpe ekpere.
Ọ bụrụ na ị gara na obodo nta a n'oge oyi ma gbagoo na echiche nke na-achịkwa ya, ị ga-ahụ ọmarịcha Krismas mma, na niile snowy ụlọ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-emikpu onwe gị na ọdịnala ndị Japan, ị nwekwara ike ịga obodo Gokoyama, dị nnọọ ka nke gara aga. Ha abụọ ekwupụtala Ihe Nketa Uwa.
Himeji Castle, otu n'ime ndị kasị dị egwu n'ụwa
Na Europe anyị nwere ọmarịcha ụlọ ochie nke ọbịbịa anyị na-ewega anyị oge ụfọdụ. E nwekwara na Japan na ndị kasị adọrọ mmasị niile bụ doro anya na nnukwu ụlọ nke himeji, dị nnọọ iche na nke ị na-ahụbu ịhụ.
Ọ dị ihe dị ka kilomita iri atọ n’ebe ọdịda anyanwụ KobeAla nke oke ehi a ma ama, a na-ahụta ya dịka otu n'ime ụlọ ochie na ụlọ kachasị mma echekwara nke Japan, ebe ọ bụ na ewu ya sitere na narị afọ nke XNUMX
Ejikwa ya ede uri nke "Obí nke White Garza" n'ihi na eji ihe-nkpuchi ekpuchi mb itsidi-ya. O kwekọrọ, ya na ndị nke Matsumoto y Kumamoto, atọ n'ime atọ nke nnukwu ihe nchebe nke mba Japan.
Nara, obodo nke ụlọ arụsị
Nara bụ isi obodo Japan n'oge ochie ma taa ọ bụ otu n'ime isi ebe ndị njem nleta na-aga n'ihi ọtụtụ ụlọ nsọ ọ nwere. Mee ihe a na-akpọ Ihe ncheta akụkọ ihe mere eme nke Nara Oge Ochienke bu kwa Ihe Nketa Uwa.
N'etiti ụlọ arụsị ndị ahụ Horyu, nke Kofutu ma ọ bụ Gango. Ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ ka edere ha na ngwụcha –Ji, nke pụtara temple. Ma karịsịa Todaị n'ihi na n'ime ya ka gigantic dị Akwa Buddha nke Nara.
N'ikpeazụ, ihe dị omimi nke ga-adọrọ uche gị n'obodo a bụ ọnụnọ nke mgbada ele n'etiti obodo mepere emepe. Ha juru ebe niile na ndị ahịa obodo ahụ emeela ka ha gaa ebe nkiri ọzọ.
Nikko, ụlọ arụsị na ụlọ arụsị dị nsọ
Ọ bụrụ na, mgbe ị gachara Nara, ịchọrọ ịga n'ihu na-ahụ ụlọ arụsị, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gaa Nikko, ebe enwere ọtụtụ, yana ebe nsọ dị ebube nke mere ya Ihe Nketa Uwa.
N'etiti nke ikpeazu, ndị nke Futarasan, nke na-hụrụ na eke na gburugburu ebe obibi nke Ogige Ntụrụndụ Nikko, na nke Tosho-gu o "Nke atọ maara ihe enwe", nke e wuru na narị afọ nke iri na asaa wee were elu nke ụdị ụkpụrụ ụlọ a na-akpọ gongen-zukuri. Banyere nke mbụ, ị ga-agarịrị na templeno.
Hiroshima, ihe nketa nke obi ọjọọ
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nleta na-enye obi ụtọ, anyị gụnyere Hiroshima na njem a nke Japan n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị bọmbụ atọm tụrụ na mba ahụ Agha Ụwa nke Abụọ.
Ya mere, otu n'ime ya kasị adọrọ mmasị ebe bụ Ememe Ncheta, ebe ị pụrụ ịhụ, kpomkwem, ihe Atomic bombu Dome, nke bụ otu n'ime ụlọ ole na ole guzogidere mbibi obi ọjọọ. Ma na-enweghị obere nnukwu ga-abụ Ncheta Cenotaph, nke ebe ngosi nka na Udo nke udo.
Ugwu Fuji, oke obi uto ihu na Japan
Ọ bụghị ihe niile bụ ihe ncheta na mba Eshia. O nwekwara oghere ndị magburu onwe ha. Banyere ndị a, anyị na-agwa gị otu ebe kachasịpụrụ iche na Japan: Ugwu Fuji, nnukwu ugwu mgbawa nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku mita anọ n'ịdị elu.
Nwere ike ịhụ ya nnukwu silhouette si Tokyo na ị ga-ahụkwa njem njem site n'isi obodo. N'agbanyeghị ogo ya, ọ dị mfe ịrịgo n'elu. E kewara ụzọ ịrị na ụzọ iri, mana ị nwere ike iwepụ ise, ebe ọ bụ na ụzọ ahụ ruru mita 2300.
Enwere ọtụtụ ụzọ iji gbagoo Ugwu Fuji nke na-enyekwa gị ohere ịnụ ụtọ ebube ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, nke ahụ Yoshida o nwere ụlọ arụsị, ryokan (ụdị ebe mgbaba nke mba ahụ) na ụlọ ụlọ tii. Also nwekwara ike ịhụ, ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma, anụ ọhịa bekee si Tibet na, n'ọnọdụ ọ bụla, lelee oke ala.
Aralọ Nara Todai
Osaka, obodo nke atọ kacha buo ibu na Japan
N'ime ihe karịrị nde mmadụ iri na asatọ, Osaka bụ obodo nke atọ kachasị ukwuu na mba Japan. Ọ dị na n'ọnụ mmiri nke otu aha, nke, n'aka nke ya, dị na Agwaetiti Honsu, nke bụ́ isi n’agwaetiti ndị Japan.
Na Osaka ị nwere ike ịhụ ọmarịcha ya ụlọ, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX. Na, ọ bụrụ na ị na-eleta ya n'oge hanami, nke ahụ bụ, mgbe cherị na-ama ifuru, ọ ga-eju gị anya. I nwekwara ike ileta Akwarium, otu n’ime ndị kasị ibu n’ụwa; ihe Sumiyoshi Yaisha ụlọ nsọ, ya e ji mara osisi oriọna na nke i nwere ike iru site tram, ma ọ bụ ụlọ nsọ dị ka Isshinji Tennoji.
Ihe ijuanya ga-abụ Kuromon Ichiba market, ebe ị ga-enwe mmetụta ndụ kwa ụbọchị nke Osaka; ihe Agbataobi Dotonbori, ama ama ha maka neon ọkụ, ihe ngosi mgbasa ozi ha dị ka nke dị Nwoke Glico ọwa gị, ma ọ bụ Ọnụ Towerzọ Towermá Tower Buinding, ụlọ na-agabiga okporo ụzọ awara awara n'ụzọ nkịtị.
Otu esi aga Japan
Ozugbo anyị gwachara gị banyere ihe ị ga-ahụ na Japan, anyị chere na ọ dị mkpa ịkọwara gị ụzọ kacha mma iji kwaga n'otu ebe gaa na mpaghara ọzọ na mba ahụ. Banyere nke a, ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ na ụgbọ okporo ígwè ahụ bụ eze.
Njikọ dị n'etiti ọtụtụ n'ime obodo ndị kachasị mkpa bụ nke emere site na shinkansen ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè, nke, dị ka aha ha na-egosi, mejupụtara netwọk ọsọ ọsọ nke mba ahụ. Yabụ na ịnweghị inye nsogbu ịnweta tiketi maka njem ọ bụla, ebe ahụ Japan Rail Pass kaadị, nke ị nwere ike iji njem ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ niile.
N'otu oge n'obodo ndị a, ụzọ kachasị mma iji gba ya gburugburu bụ Metro. Ma gi onwe gi nwere ụgbọ ala obodo nke ahụ ga-abara gị ezigbo uru. Kpom kwem, a na-atụ aro ka ụgbọ ala ndị a gafere n'etiti obodo, ebe ha dị ọgbara ọhụrụ ma dịkwa mma yana okporo ụzọ dị mma. N'ọnọdụ ọ bụla, nkwanye anyị na-aga n'ihu ịbụ ụgbọ oloko a na-ekwu maka mbibi maka nkasi obi ha na maka ọsọ nke njem ha.
Kedu Anyị anaghị adụ gị ọdụ ịgbazite ụgbọ ala. Isi ihe kpatara ya bụ na okporo ụzọ na Japan dị ka England, ya bụ, ha na-anya ụgbọala n’aka ekpe. Ma, na mgbakwunye, oke ọsọ dị oke ala, ụfọdụ akara edere ede na-egosi naanị na mkpụrụedemede Japanese; Enweghị ogige ntụrụndụ n'efu na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke okporo ụzọ na-akwụ ụgwọ.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ n'ime ebe akara ngosi iji hụ na Japan. N'ime ha ị ga-ahụ ụlọ arụsị magburu onwe ya, ebe obibi ndị mọnk na nnukwu ụlọ, kamakwa ọmarịcha oghere dị egwu. Na ihe ndị a niile, ị nwere ike ịhazi njem agaghị echefu echefu na ala nke ọwụwa anyanwụ. Echerela itinye akwụkwọ tiketi gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ihe ị ga-ahụ na Japan